အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်အတူပြင်ပ display ကို Apple တီထွင်နေသည် ငါက Mac ကပါ
Apple သည် A13 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူပြင်ပ display ကိုတီထွင်နေသည်
Toni Cortes | 24/07/2021 20:00 | ကောလာဟလများ
အက်ပဲလ်ဟာပြင်ပမြင်ကွင်းအသစ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတယ် Integrated Processor ပါတဲ့ Pro Display XDR။ သင်၏ချိတ်ဆက်ထားသော Mac ကိုဂရပ်ဖစ်တွက်ချက်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရိုးရှင်းသော Mac mini နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ခြင်း (သို့) ဂိမ်းကစားခြင်းတို့တွင်သင်၌အစွမ်းထက်သော workstation တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
အဆိုပါပြproblemနာကိုစျေးနှုန်း၌လာလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အက်ပလီကေးရှင်းမှပြင်ပဖန်သားပြင်သည်ကံကြမ္မာနှင့်ထိုက်တန်လျှင်ပေါင်းစည်းသည့်ပရိုဆက်ဆာနှင့် Neural Engine တို့ကမည်မျှကုန်ကျမည်ကိုမစဉ်းစားလိုပါ။ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်
Apple Pro Display XDR ၏ပြင်ပမြင်ကွင်းသည်စျေးကွက်တွင်အတော်လေးကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းတိုတောင်းသောကာလ၌အသစ်ထွက်ရှိသည့်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟလများမရှိသေးပါ။ သို့သော် Apple သည်ပြည်တွင်း၌ display အသစ်တစ်ခုကိုပြည်တွင်း၌စမ်းသပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရသည် A13 ပရိုဆက်ဆာ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းနှင့်လည်း အာရုံကြောအင်ဂျင်.
display အသစ်ကို codename အောက်မှာရေးဆွဲနေတယ် J327, သို့သော်ဤအချိန်တွင်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အသေးစိတ်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ ဒီဖန်သားပြင်မှာ Apple မှထုတ်လုပ်တဲ့ SoC တစ်ခုပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာ A13 Bionic ချစ်ပ်ဖြစ်သည့် iPhone 11 လိုင်းမှာတူညီနေတယ်။
ပြင်ပ display သည် A13 ချစ်ပ်နှင့်အတူ Neural Engine ပါ ၀ င်ပြီးသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများကိုအလိုအလျောက်မြန်စေသည်။ SoC နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောပြင်ပ display သည်လက်ရှိ display ကိုအစားထိုးရန်မော်ဒယ်အသစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် Pro ကိုပြရန် XDR.
ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုရှိသည် ဘက်ပေါင်းစုံ CPU ကို / GPU ကို ပြင်ပမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ Mac များသည်အတွင်းပိုင်းပရိုဆက်ဆာ၏အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးမပြုဘဲမြင့်မားသော resolution ဂရပ်ဖစ်များကိုသယ်ဆောင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
Apple သည် SoC ၏ display စွမ်းအားကို Mac ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဂရပ်ဖစ်အထူးကြပ်မတ်အလုပ်များကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ Pro Display XDR တွင်အချို့သော smart features များကိုထည့်ရန်ဤ SoC ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် AirPlay.
စီမံကိန်းမည်သို့တိုးတက်နေသည်ကိုမသိရသေးပါ မကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မည် ရောင်းရန်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အချိန်ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကောလာဟလအသစ်များမှအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » ကောလာဟလများ » Apple သည် A13 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူပြင်ပ display ကိုတီထွင်နေသည်
Apple Germany, Studio Buds နှင့်အခြားအရာများမှလှူဒါန်းခြင်း။ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး
Apple Watch ၏ဗီဒီယိုအသစ်သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူ၏ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်သည်